Qabanqaabiyaha Gawaarida Gawaarida leh Qalabka Taabashada Sawirka Taabashada BN-1711
qalabka gawaarida safarka
Qabanqaabiyaha Universal Baby Iibiyaha leh koob dahaaran ...
Istaraatiijiga Koobka Gawaarida, Qabashada Dhalada Universal ee Str ...
Suunka Amniga Gawaarida Gawaarida Gawaarida Haweenka Uurka leh BN-1733
Qabanqaabiyaha Gawaarida Gawaarida leh Khariidadda Taabashada Taabashada ...
Kursiga ilaaliyaha gaariga ee suufka ugu adag leh ee ilmaha a ...
Naqshadeynta Naqshadeynta Xayawaanka ee wajahaysa Ilmaha Fudud ee Ammaanka Mirr ...
Jilicsan Fabric Meegaarka 360 ° hagaajin karo Baby Car Mirror BN ...
360 ° Laydh Lagu hagaajin karo Muraayadda Caruurta ee Re ...
Badbaadada Carruurta Dhallaanka ah ee ugu Fiican Muraayadda Gaariga BN-1601
1.Bogga wax soo saarka: 53 * 3.5cm
Waxyaabaha biyuhu xireen waxay ilaaliyaan gogosha kursiga gaariga
Jeebka looxa oo leh dariishad daawadayaal taabasho-shaashad cad ah
4.Fits Android iyo macruufka Kiniiniga ilaa 10 inji
5.Iska ilaali caruurta iyo kuraasta dambe ee rakaabka
6.6 jeebabka waxyaabo badan kaydinta
7.Ku rakiban gawaarida badankeeda kuna rakibo ilbiriqsiyo
MOQ: 500 Cadad
Calaamadda: Sumad gaar loo habeeyay oo la heli karo
Shahaadada: CE, RoSH, EN71, ASTM, REACH, CPSIA
● Nadiifi Hayaha iPad-ka - Abaabulayaasha baabuurta waxay hayn karaan ilaa 10 "iPad iyo kiniinno. Shaashadda kaniiniga ayaa sifiican looga dhex arki karaa jeebka daaqada sidoo kale waad xakamayn kartaa aaladda jeebka ku jirta. Qabanqaabiyaha keydinta baabuurka wuxuu la socdaa Holo / Dhago Dhageysi carruurta & kuraasta dambe ee rakaabka madadaaliyey.
Material Qalab saaxiibtinimo & Biyo-la'aan ah - Qalabka deegaanka u habboon ee 600D Polyester, oo kaamil ah ka ilaaliya kuraastaada xoqitaanno, daadin, dheecaanno, calaamadaha lagu garto, dhoobada, uskagga, iyo gabowga. Ku habboon kuwa leh carruurta iyo xayawaanka sidoo kale! yaree dhaawaca kabaha isla markaana dayactir dusha sare ee gawaarida aan lahayn cillad sanado badan oo soo socda. Waxay ku habboon tahay inta badan baabuurta, gawaarida, Jiifka, gawaarida xamuulka, gawaadhida yar yar iyo SUV. Si fudud loo nadiifiyo daabacadaha wasakhda ah dushooda, kaliya waxaad u baahan tahay maro qoyan si aad u nadiifiso. Dharka u adkaysta biyaha, dharka mashiinka lagu dhaqi karo ee daryeelka fudud.
Ckets Jeelal badan oo lagu kaydiyo - Jeelal badan oo keyd ah - Abaabulaha kursiga dambe ee gaariga waxaa loogu talagalay inuu si fiican u keydiyo alaabtaada iyo alaabtaada oo uu ku siiyo jawi hagaagsan oo baaxad leh. Waxay ka kooban tahay 6 jeeb oo loogu talagalay keydinta dhalooyinka, taleefannada ama kiniiniyada bangiyada korontada, joornaalada, cuntooyinka fudud, waxyaabaha carruurtu ku ciyaaraan iyo iwm.
Allation Rakibaadda La Qaadi Karo & Fudud - Suunka xarkaha la hagaajin karo, xargaha birta, aluminium jillaab lagu daro xargo adag ayaa xaqiijinaya xasiloonida weyn ee qabanqaabiyaha kursiga dambe. Rakibaadda waa fududahay, kaliya waxay qaadataa in ka yar 5 daqiiqo in la dhammeeyo. Ku dheji dhammaan kursiga gaariga ee keydka gaariga kuraasta cabirka cabirrada 18 "ballaaran x 25.5". Si buuxda oo fudud u dabooli kara kursigaaga dambe. Ku habboon kuraasta baabuurta badankood, gawaarida, Gawaarida yaryar, gawaarida waaweyn, gawaadhida yar yar iyo SUV.
Hore: Kursiga Gawaarida Gawaarida oo leh suuf adag oo loogu talagalay Kursiga Baabuurka Cunugga iyo Ilmaha BN-1706
Xiga: Qabanqaabiyaha Gawaarida Gawaarida leh Qalabka Taabashada Sawirka Taabashada BN-1712
qabanqaabiyaha gaariga ilmaha
gadaal qabanqaabiyaha gaariga
qalabka baabuurta ee carruurta
qalabka baabuurta qabanqaabiyaha gudaha
qalabka gawaarida qabanqaabiyaha
gaariga qabanqaabiyaha kursiga dambe
gaariga qabanqaabiyaha kursiga dambe ee caruurta
qabanqaabiyaha gaariga dib
bacda qabanqaabiyaha gaariga
sanduuqa qabanqaabiyaha gaariga
qabanqaabiyaha baabuurta ee carruurta
kursiga gaariga qabanqaabiyaha gadaal
kursiga gaariga gadaal abaabulka
qabanqaabiyaha kursiga gaariga
qabanqaabiyaha jirida gaariga
qabanqaabiyaha keydinta jirridda gawaarida
baabuur haysta ipad
ipad kiniin haysta
qabanqaabiyaha carruurta ee gaariga
Suunka Amniga Gawaarida Gawaarida Gawaarida Haweenka Uurka leh BN ...
Qabanqaabiyaha Universal Baby Stroller oo leh Qalab ...
Universal Shade Window Car, 2 Pack Car Side Win ...
Gawaarida Cunnooyinka Stroller, Deluxe Snack Pod
360 ° hagaajin karo LED Light Up Baby Car Mirror wi ...
Kursiga Gawaarida Gawaarida leh Cufnaanta Cufan ee Ch ...
Ningbo Benno Carruurta Daryeelka Waxyaabaha Co., Ltd waxaa la aasaasay 2016. Kahor sanadka 2016, waxaan nahay soo saaraha oo kaliya waxaanna ganacsi ka sameysannaa wakiilka ganacsiga Shiinaha, sanadkii 2016, waxaan dhisnay kooxdeena ganacsiga dhoofinta oo aan noqono shirkad soo saare & ganacsi.
Telefoonka gacanta: +86 13486417597
Cinwaanka: Qolka 309, Rihu Xarunta Ganacsiga Caalamiga Dhismaha Lambar 312, Lane 645, Wadada Renmin, Ningbo